တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၁၀ သန်းကျော် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ အမျိုးသားကောလိပ် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ၏ ဝင်ခွင့်ကတ်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကျောင်းအဝင်ဝတွင် ပြင်ဆင်နေပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၅ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဇွန် ၇ ရက် ယနေ့တွင် စတင်ကျင်းပမည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကောလိပ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း ၁၀.၇၈ သန်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများကို ပံ့ပိုးပေးသွားရန် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားထားပြီး ၊ အထူးသဖြင့် မသန်စွမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများပေးသွားရန် နှင့် ဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအပါအဝင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားရန်လည်း ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုချိန်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီပြုမူရမှာဖြစ်သလို စာမေးပွဲ စည်းကမ်းများကိုလည်း အပြည့်အဝလိုက်နာသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ Gaokao ဟုလူသိများသည့် ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲသည် အမှန်စင်စစ် တရုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးဆုံး စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းကို စမ်းသပ် ရွေးချယ်ရန် မျှတသောစနစ်တစ်ခုဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော စာမေးပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Over 10 mln students to sit China’s college entrance exam
BEIJING, June6(Xinhua) — A total of 10.78 million Chinese students will sit the country’s annual college entrance exam starting Monday.
Photo – A staff member sets upacandidate identification system atanational college entrance examination site in Beijing, capital of China, June 5, 2021. (Xinhua/Ren Chao)